अन्योलमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
अन्योलमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान
पदाधिकारी र अस्पताल नेतृत्व आरोप–प्रत्यारोपमै व्यस्त
फाल्गुन २, २०७४ दुर्गालाल केसी
दाङ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहेजस्तो गति लिन सकेको छैन । उपकुलपति नियुक्तिको लामो समय बित्दा पनि नयाँ काम केही सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को असोज २ को निर्णयले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ३ सय शय्याको बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म यसको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हालसम्म ५० शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक जग्गाबारे पनि अहिलेसम्म केही खोजी भएको छैन । भएका काममा पनि एकपछि अर्को विवाद र असन्तुष्टि मात्रै आइरहेका छन् । भदौ १४ गते माओवादी नेता जीवन गौतमलाई प्रतिष्ठानको सहजकर्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर उनले अहिलेसम्म केही काम गर्न पाएका छैनन् ।
‘प्रतिष्ठान कार्यालय काठमाडांैमा खोलेर काम गरिएको छ । दाङमा कार्यालय हुनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म केही स्वरूप बनेको छैन,’ गौतमले भने, ‘पदाधिकारी मात्रै नियुक्त भएका छन् । सभाका सदस्य नियुक्त भएका छन् । प्रतिष्ठान स्थापनामा लामो समयदेखि लागिपरेका सरोकारावालासँग कुनै पनि समन्वय र सरोकार राखिएको छैन ।’
राप्ती क्षेत्रका राजनीतिक दल, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नभएको गौतमले बताए । ‘सिनेटर सबै जिल्लाबाहिरका छन् । प्रतिष्ठान चल्न सुरु गरेमा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई सिनेटर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘चन्दादाताबाट काठमाडौं र ललितपुरका मान्छे राखिएको छ । नियमावली बनाउँदा अस्पतालका कुनै प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै सरोकार राखिँदैन ।’
कात्तिक २४ मा प्रतिष्ठानको ऐन संसद्बाट पारित भएको थियो । उपकुलपतिमा डा. संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । उनी घोराही आएर हाजिर गरेपछि फेरि फर्केर नआएको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडांै बसेर प्रतिष्ठानको काम गर्न खोजेको भन्दै अस्पताल कर्मचारीले आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् ।
नियमावली निर्माणलगायत समग्र काममा स्थानीय राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र सरोकारवालासँग समन्वय नगरेको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । अस्पतालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिष्ठानले कर्मचारीको भावना र स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावली तयार गर्दा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा र भावना प्रतिविम्बित हुनेगरी सबै सरोकारवालासँग व्यापक अन्तक्र्रिया गरेर मात्र काम गर्न अनुरोध गरिएको छ । कर्मचारीको शनिबार बसेको बैठकले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा सबै सरोकारवालाको सहयोग लिएर काम गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई अनुरोध गरी पठाएका छन् ।
‘प्रतिष्ठानको नियमावली बन्दा अस्पताल कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधाबारे स्पष्ट कुरा बोलिएन,’ निमित्त मेडिकल सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले भने, ‘स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमावली बनाउनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन ।’ प्रतिष्ठानसभामा पनि स्थानीय प्रतिनिधित्व अति न्यून भएको उनले गुनासो गरे ।
अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष शंकरसिंह थापाले पनि उपकुलपति डा. भण्डारीले कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर काम गर्ने आश्वासन दिए पनि केही नभएको बताए । ‘अहिले कार्यरत कर्मचारीको भविष्यलाई हेरेर नियमावली बनाउनुपथ्र्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो नभएर एकलौटी र जबर्जस्ती बनाउन थालियो । अन्य प्रभावकारी काम हालसम्म केही हुन सकेन ।’ अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने गरी ऐन बनेको तर यसमा सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. पन्थीले असहयोग गरिरहेको उपकुलपति भण्डारीले बताइन् । ‘हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं तर पन्थीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् । यसले काम गर्न निकै कठिन भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी नियमावली बनाउने काममा व्यस्त थियौं । अब जिल्ला गएरै सबै काम थाल्छौं ।’
दुई सयभन्दा बढी चिकित्सक, कर्मचारी चाहिने प्रतिष्ठानमा अहिले अस्पतालमा कार्यरतलाई सजिलै समायोजन गर्न सकिने उनले बताइन् । यसबारे अनावश्यक राजनीति गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । ‘कर्मचारीलाई अनावश्यक उत्तेजित पार्ने र आन्दोलन गर्न उक्साउने काम भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिष्ठानको काम हाम्रा कारणले होइन, अस्पतालको अहिलेको नेतृत्वबाट ढिला भइरहेको छ ।’
अब काम सुरु गर्नलाई प्रतिष्ठानको बोर्डसमेत लेखाएर तयार पारिसकेको र छिट्टै जग्गा खोज्ने काम हुने
हाल अस्पतालमा नौजना मात्रै कन्सल्टेन्ट विशेषज्ञ डाक्टर छन् । २८ स्टाफ नर्स छन् । सुपरिन्टेन्डेन्टबाहेक ११ औं तहको दरबन्दी नै छैन । ११ औं तह मेसु भएर मात्रैआउने भएकाले हालसम्म प्रमुख मेसु पाउन नै कठिन भइरहेको छ । थोरै जनशक्तिले २२ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको निमित्त मेसु पन्थीले बताए । राप्तीका पहाडी जिल्लाका साथै अर्घाखाँचीसम्मका सेवा लिनआउने पन्थीले जानकारी दिए । दैनिक ४ सयभन्दा बढी बिरामी यहाँआउने गर्छन् ।
उखुको विकल्पमा तरकारी खेती
ढिक्री पकाउँदै माननीय
सामूहिक लगानीमा जलविद्युत्
पहाड चढ्न लिस्नो, डाँडैडाँडामा पदमार्ग
अग्रिम श्रमिक कर–‘भारतीय कामदारलाई अव्यावहारिक’